Sawirka BBC Africa eye ay ka Bixiso Afrika? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Maxay Ka Dhigan Tahay Xil Ka Qaadista ‘Jeneraal Gabre’?
BBC Somali, June 26, 2018
Maxamed Cabdirisaaq Diriye — August 4, 2020
Lix bilood ka hor ayeey ahayd markii aan daawaday barnaamij laga diyaariyey jaamacado ku yaalla dalka Nijeeriga iyo Gaana. Wuxuuna ahaa barnaamij looga hadlayo tacaddiyada gabdhuhu ay kala kulmaan macaliinta iyaga oo ka dalbanaya xiriir si ay ugu fududeeyaan baahida ardayadda.
Qof arday ah waxyaabo badan ayaa uga xirmi kara barayaasha. Waxaa lasoo bandhigay muuqaallo sir ah oo macalimiin laga duubay iyaga oo xodxodanaya gabdho garab uga soo baahday.
Markii ugu horreysay aad ayaan uga murugooday arrintaas, waana ku bogaadiyey BBC-da barnaamjida Africa Eye(indhaha Afrika). Aad ayaan ula dhacay sida toolmoon ee looga diyaarshay muuqaalka iyo warbixinta. Taasi waxay keeni kartaa in uusan macalin danbe arrintaas ku dhiirran meel uu joogaba.
Barnaamijkaas wuxuu daaha ka qaaday oo caddayn u noqday inay jiraan tacaddiyo gabdhuhu ay kala kulmaan goobaha waxbarashada.
Isla ayaan kale ayaan arkay barnaamij dukumantari ah oo laga diyaariyey dad Afrikaan ah oo ku nool dhululka Carabta oo shaqaale ah oo sidii addoontii la kala gadanayo weliba iyada oo la isticmaalayo ablikeeshin (application)!
BBC Africa Eye waa qaybta baaritaanada BBC Africa. Iyaga oo la shaqeynaya qaar ka mid ah saxafiyiinta ugu kartida badan qaaradda, waxay sameyaan dokumentiyo baaritaan ah oo loogu talagay BBC World si caalamka kale u arkaan waxyaabaha ka dhaca Afrika.
Ka dib rukun ayaan ka dhigtay daawashada barnaamijka Indhaha Afrika. Muuqaalo sir ah oo lagu duubay Kaamiro guluus lagu xiray ayaa badi lasoo daayaa. In wax khaldan daaha laga rogo, waxay horseedi kartaa toosinta iyo hagaajinta waxyaabaha qarriban siiba arrimaha dowladnimada, isla-xisaabtanka iyo daah-furnaanta siyaasadda. Muddo badan baan ku xirnaa, wuxuu barnaamijkaan diiradda saaraa: danbiyada, daroogada, dilka, dhaca, kufsiga, dhillaysiga, musuqmaasuqa, shirqoolada, naxariis darrada, jirdilka maxaabiista, shaqo la’aanta, saboolnimada, tacaddiyada kala duwan ee dumarka, keli-telisnimada, argagixisada, burcad badeedda, addoonsiga, qowleysatada, xanuunada, sadbursiga, tacaddiyada carruurta iyo dowlad xumada.
Qofkii weligii Afrika arag, muxuu ka aaminayaa markuu barnaamijkaas muddo daawado?
Sawir noocee ah ayaa uga baxaya? Muddo ka dib ayaan isweddiiyey maxaa u diiday hal muuqaal oo sawir wanaagsan Afrika ka inay baahiyaan? Waxaa qurux badnaan lahayd inuu noqdo barnaamij dhanka togan(wanaagsan) iyo dhanka tabanba(xun) diiradda saaraya. Afrika waa qaaradda dunida ugu khayraadka badan ugu saboolsan.
Waa qaaradda hadda uu ka jira horu-kac baaxad leh. Afrika waxay ka koreysaa dowladnimo wanaagga, amniga iyo nabadda, dhaqaalaha, abuurista fursaha, siyaasadda waxbarashada iyo horumarinta arrimaha bulshada.
Daliisha haddii aad diidid liidnimo ayaa kugu jirta oo Soomaalidu waxay dhahdaa doqomada ayaa amaanta jecel iyada oo ay saas tahay, haddana barnaamijka BBC-da ee Indhaha Afrika ayaa ah mid dhan ka raran oo aan ka wada turjumayn waxa Afrika ka socda.
Ma ahan wax qurux badan sidii diqsiga in la raadsado inta taban ee ka fog horumarka.
Waxaan la soconaa in musuqmaasuqo hareeyey Afrika dal yar iyo mid wayn, mid dowladnimo adag leh iyo mid kaleba, mid dimuqraaddi ah iyo mid keligi-telis haystaba. Waa ay qurux badan tahay in toosh afar qaad ah lagu ifiyo oo waa loo baahanyahay balse sidaas oo kale waa in dhanka horumarka la iftiimiyo. Maxay kula tahay adi?
Next post Gorofeynta Buugga Shuruudu Nahda
Previous post Doodaha ku Gaadaaman Kalsooni kala Noqoshada Xukuumaddii Xasan Cali Khayre?